एउटा खोपका लागि वृद्ध राईको सङ्घर्ष - Dainik Online Dainik Online
एउटा खोपका लागि वृद्ध राईको सङ्घर्ष
प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७८, बुधबार १२ : ०७
फिदिम, कोभिड–१९ दोस्रो लहर जिल्लामा फैलनुअघि नै ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा अत्यावश्यक सेवाका व्यक्तिहरुलाई कोभिशिल्ड खोप दिन थालिएको थियो । दोस्रो डोज नआए पनि १३ हजारभन्दा बढीले कोभिशिल्ड खोप लगाए जिल्लामा । त्यसपछि आउन थाल्यो भेरोसेल । यस पटकसम्म तीनपटक भेरोसेल खोप लगाउने अभियान चलिसक्यो । यस क्रममा ६० वर्षका नागरिकदेखि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतले यो खोप पाए तर कतिपयले खोप लगाउन वास्ता गरेनन् । कसैले अफवाहका पछि लागेर खोप लगाउन मानेनन् । कतिपयले खोप लगाउन पाउने कुराको जानकारी नै पाएनन् ।
“अघि ११–१२ बजेतिर आएको थिएँ । नागरिकता पनि बुझाएको छु । पानी पर्न आँटिसक्यो । हाम्रो पालो आउँदैन रे रु”, यहाँ आउनुभएको कति समय भो भन्ने प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्दै राईले भन्नुभयो, “अहिले आउँदै गरेको मान्छेहरु सुई हानेर गइसके । हाम्रो पालो किन आएन ? बुझिदिनुस् न ।”
सरकारले ५५ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई भेरोसेलको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार रामकुमार राईसहितका ज्येष्ठ नागरिकहरुले सहजै खोप पाउनुपर्ने हो तर जिल्लाको सदरमुकाम भएको वडाकै एक वृद्धले पाँच घण्टा कुरेपछि अरूले आवाज उठाइदिँदा बल्लतल्ल खोप पाउँछन् भने दूरदराजका सामान्य नागरिकहरुले कसरी सहजै खोप पाउलान् ? उनीहरुलाई कसले सही सन्देश पु¥याइदेला ? अरू विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरुको पहुँचमा यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरु कहिले पुग्लान् ? खोप कुरिरहेकाहरुका प्रश्न थिए ।
अमेरिकामा सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुले भन्दा बढी ज्यान लियो कोरोनाले!
यी लक्षण देखिएमा जोसुकैलाई हुन सक्छ अल्जाइमर्स
आजदेखि खोप अभियान पुनः सुरु, क–कसले पाउँछन् ?
चीनबाट ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल आइपुग्यो, सोमबारदेखि लगाइने
थप ४४ लाख डोज खोप लिन निगमको जहाज बेइजिङमा, हिमाली जिल्लालाई प्राथमिकता